Gbasara Anyị | Tiantai Dingtian Nkwakọ ngwaahịa Co., Ltd.
ekwentị mkpanaaka pulp tree
Ekwentị mkpanaka diski siri ike
pulp tree maka condenser pen
Kọmputa ngwa akwụkwọ tree
ọzọ electronic ngwaahịa pulp tree
Nkwakọ ngwaahịa Ndị Ahịa
Beer kalama pulp tree
Pulp Mbukota maka ndị ọzọ kwa ụbọchị dị mkpa
Ihe Ngosiputa Ngwa
Ihe ịchọ mma igbe onyinye ma ọ bụ pulp tree
Tiantai Dingtian Nkwakọ ngwaahịa Co., Ltd. bụ ọkachamara factory na-enye elu-ọgwụgwụ mmiri pịa kpụrụ pulp nkwakọ ihe na ihe ngwọta, ikpokọta na ezi imewe ọrụ, CNC machining ọrụ, uka mmepụta na logistic ọrụ.
N'ịbụ onye guzosiri ike na 2014, ụlọ ọrụ ahụ dị na ógbè Tiantai, ógbè Zhejiang, ebe ngosi mba 5A nke mara mma. Ugbu a anyị factory bụ ihe karịrị 6500 square mita na nwere ihe karịrị 100 ọrụ. N'ime afọ 6 gara aga, anyị na-egbo mkpa nke ndị ahịa na ngwaahịa na nkwado teknụzụ dị mma yana ọrụ ahịa. Ugbu a, anyị abụrụla nnukwu-ọnụ ọgụgụ, oge a na ọkachamara elu-ọgwụgwụ kpụrụ eriri mmepụta ụlọ ọrụ nwere ezi aha.
Anyị ụlọ ọrụ e ọdịda nke asọpụrụ utu aha a na-akpọ "County Top 10 entrepreneurial Star" na "Top Iri Obere Ma Ọkara-sized Enterprises nke Science na Technology Uto Of The Province". Anyị agafeela asambodo sistemu ISO9001, asambodo sistemu ISO14001 na asambodo FSC.
N'ime afọ isii gara aga, ụlọ ọrụ anyị na-eto eto ma guzobekwa usoro njikwa mma zuru oke, sistemụ nchekwa na usoro ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ugbu a, anyị nwere otu ìgwè ndị ọkachamara na njikwa na ndị ọrụ nlekọta, ma kwadebere ha na mmepụta na ule nyocha dị elu.
Anyị na-emepụta ngwaahịa ndị a kpụrụ akpụ dị ka ekwentị mkpanaaka, mpe mpe akwa, diski ike, ndị na-eme njem, ihe ịchọ mma na nkwakọ ngwaahịa. Na 2020, anyị na-agbasawanye ahịa ọhụrụ anyị iji mepụta ngwaahịa ndị agba agba agba. Ngwaahịa anyị niile na-ezute ROHS2.0 na Halogen Free Standards.
Zụlite ma mepụta ebu
Uda na dakọtara pulp
Ọdịdọ ẹmbrayo udi
Na-ekpo ọkụ na ịpị
Nkwakọ ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa
ISO9001 Quality Management System Asambodo
ISO14001 asambodo njikwa gburugburu ebe obibi
Dyeing Wrapping pulp Holder, Igbe nri ngwa ngwa, All Ddị Of Dyeing Wrapping pulp Holder, Food mezuwo Packaging pulp Boxes, Igbe Nkwakọ ngwaahịa, Ejiri Agba pulp Tray,